Iwo madiki mafaro anokosheswa nevanyori chete | Zvazvino Zvinyorwa
Mazuva mashoma apfuura ndakakuunzira mamwe eaya 10 dzechokwadi uye nhema manyepo nezvevanyori, uye mumwe wavo aigara ari ega mugadziri, muchimiro ichocho chinowirirana matinogara isu chete uye kuti (kunze kwemumwe munyori) vashoma vanozogona kunzwisisa. Nekudaro, hazvisi zvese zvakashata kana zvinoshungurudza muchikamu icho chekusurukirwa, asi zvinopesana. Iwe unokurudzirawo chero cheizvi zvinotevera mafaro anokosheswa nevanyori chete?
1 Iwe, kabhuku kekutenga kofi
2 Kufuridzirwa kweusiku
3 Iva nepfungwa yakanaka
4 Kuverenga bhuku rakanaka
5 Pedzisa zvawatanga
6 Ona bhuku rako rakaburitswa
7 Muonero wekutanga wemuverengi
8 Kumwe kunhuwa
Iwe, kabhuku kekutenga kofi
Vanhu vanotitarisa nenzira isinganzwisisike pakupasa uye avo chete vanokoshesa kunakidzwa kwekunyora (zvirinani mukabhuku kwete pane komputa) ndivo vanouya kwauri kuti vakuudze kuti naiye anotidaro. Iye achakuudza uchinyemwerera, sekunge ari kuti "hatisi kunzwisiswa." Nekuti hongu, mafaro mashoma akanakira munyori sekugara pane terace yekudyira (inogona kunge yatove imwe munharaunda yako seye kuCuba kana kuSan Francisco) uye nekuburitsa mazwi.
Imwe sarudzo inowanzo fanwa nevanyori ndeye nyora usikuHatizive kuti sei, pamwe nekuti panowira nyeredzi, munhu wese anowedzera kudetemba, kusanzwisisika, nekuti kufemerwa kwakafanana nezizi rinorara masikati uye rinotanga kuyerera kana mwenje wadzikira. Zvino kunouya iro rinotevera zuva apo patinoverenga zvatakanyora pasi pesimba reimwe (kana kupfuura) magirazi ewaini. Asi ndiyo imwe nyaya.
Iva nepfungwa yakanaka
Panguva iyoyo chaiyo paunenge wave kuda kuvata pasi nekuvhara maziso ako, pfungwa dzinotanga kutenderera uye kamwe-kamwe zviripo izvi: iro zano rakakura, chirevo icho, nharo iyoyo yaunofanirwa kufiriza neimwe nzira mupasirese. Uye nekukurumidza unomuka, tsvaga bepa nechinyoreso (kana nharembozha, uchikundikana izvo) uye nyora zvese izvo mameseji ako akazevezera kwauri panguva isingatarisirwe. Ipapo iwe unovhara maziso ako zvakare, asi iwe unoziva iwe uchangobva kuvhura bhokisi raPandora.
Kuverenga bhuku rakanaka
Chero munyori anofanirwa kuverenga kuti avandudze kana kugadzirisa hunyanzvi hwavo, chimwe chinhu chandinofunga vazhinji vedu tinobvumirana nacho. Zvakadaro, dzimwe nguva zvakakosha kunongedzera musiyano uripakati pebhuku ratinoda uye neiro ratinogona kutora pfungwa kana maonero matsva. Kuongorora kuti dzimwe nzira dzekutaura nyaya dzinokwanisika kunogona kudzoreredza matauriro atinoita mazano edu.
Kunyangwe iri nhetembo, nyaya pfupi kana nganonyorwa, mafaro mashoma emunyori anogutsa senge yekupedzisa iro basa raakange anyudzwa kwenguva refu. Kubva ipapo zvichienda mberi, imwe nhanho inotanga, imwe umo mafaro nekuodzwa mwoyo zvinofambidzana asi izvo zvaunofanira kutarisana nezvose zvisirizvo zviri munyika.
Ona bhuku rako rakaburitswa
Nyanduri weCuba Jose Marti Akambotaura kuti "kune zvinhu zvitatu izvo munhu mumwe nemumwe anofanira kuita panguva yehupenyu hwake: sima muti, nyora bhuku uye uve nemwana." Chirevo chinosimbisa runako rwezvakasikwa uye, izvo kunyangwe hazvo chisina kuzadzisa tsamba yacho, ndinogona kutsigira iyo isingatsanangurike nguva yaunoburitsa bhuku. Chikamu chako chakakomberedzwa mubhuku, chine kavha yacho, chakagadzirira kugadzira mucherechedzo (kunyangwe zvidiki sei) pasirese. Uye izvozvo zvinoshamisa.
Muonero wekutanga wemuverengi
Kuedza kukuru kunotanga kubhadhara, uye chiratidzo chekutanga chinouya nenzira yemafungiro akanaka kana ongororo umo mumwe munhu anoti akaverenga bhuku rako uye akarikurudzira kune vamwe vanhu; chando chatsemuka uye imwe nhambo nyowani inotanga. Uye ndezvekuti munyori wese anoda mhinduro, ingave yakanaka kana yakaipa, kuti akoshese mhando yebasa, atsanangure gwara rekutevera asi, kunyanya, simbisa kukosha kwekutenda mune zvatinoita.
Iro rebhuku rekare, iro reiyo nyowani, iyo yemapenzura nemapepa, iya yechitoro chemabhuku chekare, iyo iyo, zvisingatarisirwi, inokuendesa kuhucheche uye nekukuvhurira gonhi remukati mauri kune mazano matsva.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Iwo madiki mafaro anokosheswa nevanyori chete
Beinecke Raibhurari yeRare Mabhuku uye Manyoro